Akaakuu Bal'ina Taattoo
Akaakuu taattoo fuula duraa Taattoo Masaka irraa filuu ni dandeessa.
Bal'inni taattoo gatii siilloo y irratti akka qabxiitii agarsiisa. Siilloon x akaakuu agarsiisa. Gatiin y walfakanne deetaa maraa sararaan wal qabata. Bal'inni sararoota lamaan gidduu jiru halluun guutama. Taattoon bal'inaa kan irratti xiyyeefatu jijjiiraa akaakuu tokko irra gara birootti.
Baratamoo -Akaakuu xiqqaan kun gatii hunda akka of danda'aa y ti kaasa. Dursee bal'ina tarjaa dhumaa hangii deetaa irratti kaase itti aanee hanga dhumaatti fi kanaaf kan kan fakkata fi dhuma irratti jalqabni tarjaa deetaa ni kaafama.kanaaf, yoo gatiin tarjaa duraa irra guddaa gatii biroo ta'e bal'inni dhuma irratti kaafamu bal'inoota biroo dhoksa.
Walirra Tuulamaa- Akaakuun xiqqaan kun gatii waliigalatti wal'irra tuulamaa tokko tokkoo kaasa. Gatii martuu akka mul'atan mirkaneesse deetaan kamiyyuu deetaa birootiin hin dhokatu. Haata'u malee gatiin y hammana gatii y murtaa'ee bakka hin bu'u. Tarsaa dhumaa qofaaf yoo ta'e malee kan garjallaa walirra tuulamaa irratti ka'e.
Dhibbayyaa - akaakuun xiqqaan gatii kaastuu kun waliigalatti walirra tuulaa fi akka akaakuu dhibbeentaa madaalli waliigalaati.
Title is: Akaakuu Bal'ina Taattoo